Hlola Valve Indlela Londoloza Amandla? - China Thanda Valve (Tianjin)
Hlola umphini iwukuba sincika emandleni we uketshezi ngokwayo ngokuzenzakalelayo ivule beyivale valve, indima yayo ukuvimbela abezindaba emuva. Igama layo eziningi, ezifana isheke valve, isheke valve, elilodwa-ukugeleza iminyango. Ngokusho isakhiwo zingahlukaniswa izigaba ezimbili.
(1) Phakamisa: umphini umzimba ukuhambisa eduze centerline mpo. valve okunjalo ezimbili: umuntu ovundlile, igibele ipayipi ovundlile, valve yavala-off valve ukuma efanayo, kanti omunye mpo, aboshelwe ipayipi mpo.
(2) Swing: umphini esihlalweni emhlabeni ngaphandle kwe ukujikeleza pin, la ma-valve abe Lobe olulodwa, valve double Orange Peel amaphuzu, kodwa isimiso uyefana.
Ukuncela unyawo umphini futha ukuncela ipayipi is zikhubazekile valve, isimo sawo futhi kulezi zinhlobo ezimbili stop valve ofanayo, kepha ukuphela kwayo aphansi ivuliwe ukuze avumele amanzi ukungena.
isikhathi Iposi: Septhemba-09-2018